पेण्ट्सले पादको गन्ध रोकिंदैन भने मास्कले भाइरस कसरी रोकिन्छ ? एक अमेरिकीको तर्क (हेर्नुस् भिडियो) - Vishwanews.com
पेण्ट्सले पादको गन्ध रोकिंदैन भने मास्कले भाइरस कसरी रोकिन्छ ? एक अमेरिकीको तर्क (हेर्नुस् भिडियो)
गत जुलाई १० तारिख क्यालिफोर्नियास्थित एक क्याफे ‘पनेरा ब्रेड’मा खाना खरिद गर्न जाँदा मास्क लगाउन अस्विकार गर्ने एक स्वेत महिलाले अनौठो तर्क दिएर मास्क लगाउन अस्विकार गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । खानेकुरा खरिद गर्न लाईनमा बसेकी ती महिलालाई क्याफेका कर्मचारीले मास्क नलगाएको भन्दै उनको अर्डर लिन मानेन ।खानेकुरा खरिद गर्न नपाएपछि ती महिलाले; “पेण्ट्सले पादको गन्ध रोक्दैन भने मास्कले पनि कोरोनाभाइरस रोक्दैन” भन्दै बाहिरिएकी थिइन ।
ती महिला पसल भित्र बिना मास्क नै प्रबेश गरेकी थिईन । क्याफेका कर्मचारीले उनलाई तत्काल एउटा मास्क दिएका थिए तर ती महिला त्यो मास्क हातमा लिएर मात्र बसिन् । लगाउन भने मानिनन् । क्यालिफोर्नियामा गत जुलाई १५ देखि कुनै पनि बन्द कोठा भएको सार्वजनिक स्थलमा प्रबेश गर्दा मास्क अनिबार्य गरिएको छ ।